बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘पद्यावत’ कस्तो रुपमा आउला ?
बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘पद्यावत’ कस्तो रुपमा आउला ?
साझा अनलाईन २०७४ पौष २५ गते मा प्रकाशित 130 पटक पढिएको
छायांकनको क्रमदेखि नै विभिन्न लफडा झेलेका फिल्म ‘पद्यावती’ अन्तत ‘पद्यावत’ नाममा सार्वजनिक हुने पक्कापक्की भएको छ । यसको रिलिज डेट तोकिएको छ, २५ जनवरी । यद्यपी यसका सबै दृश्य सग्लो भने रहने छैन । यस फिल्ममा मेन्सन गरिएको दिल्ली, चितौड र मेवाड जस्ता नाम हटाइनेछ । राजपुत करणी सेनाको निसाना बन्दै आएको फिल्ममा थुप्रै फेरबदल हुने बुझिएको छ ।
-२५ जनवरीमा सिनेमाघरमा जुन हिसाबले दर्शकले फिल्म देख्नेछन्, त्यो पूर्ण रुपले काल्पनिक कथा हुनेछ ।
किनभने कथामा उल्लेख स्थानको नाम परिवर्तन गरिएकोले वास्तविक घटना कहाँ घटेको थियो भन्ने भेउ पाइनेछैन ।
-दर्शकलाई यो कुरा पनि थाहा हुने छैन कि, अलाउद्दीन खिलजी कहाँबाट आएका थिए र कहाँ गएर राजपूतसँग उको युद्ध हुन्छ । खिलजीको भूमिकामा रणवीर सिंह छन् ।
फिल्मको रि-एडिटिङ हुँदैछ
यसबेला सेन्सर बोर्डद्वारा दिइएको सुझाव अनुसार फिल्मको री-एडिटिङ हुँदैछ । यो काम सून्य लेभलबाटै सुरु हुँदैछ ।
राजस्थान सरकारको विरोध
भारतिय सेन्सर बोर्डले फिल्मको नाम बदल्ने सल्लाह दिएर फिल्मलाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिएको छ । तर, राजपूत समुदायले फिल्मको अहिलेपनि बिरोध गरिरहेको छ । यता राजस्थान सरकार राजपूत समुदायसँग मिलेर विरोध गरिरहेको छ ।
अक्षय पछि हटेनन
पद्यमवतको रिलिज डेट अनिश्चित हुँदा अक्षय कुमार स्टारर ‘पैडमैन’ले धुम मच्याउने अनुमान गरिएको थियो । अक्षयको फिल्मले अहिले ठूलो बजेटको फिल्मलाई पनि टक्कर दिइरहेको अवस्था छ । ‘पैडमैन’ले पनि धुम मच्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उक्त फिल्मसँग भन्सालीको प्रतिक्षित फिल्म ‘पद्यावत’ रिलिज हुने भएपछि अक्षयको फिल्म चेपुवामा पर्ने डर छ । यद्यपी अक्षय पछि हट्नेवाला छैनन् । उनी निर्धारित डेटमा फिल्म रिलिज गर्ने अडानमा छन् ।